भागवत गितालाइ छोएर, ॐ लेख्नुहोस – सोचेको काम पुरा गर्नुहोस्!
धनी बन्ने इच्छा छ ?
धर्मशास्त्र भन्छ- जिन्दगीमा कहिल्यै नगर्नुहोस् यी ९ गल्ती” जय लक्ष्मी माता”सबैले सेयर गरौ।
ॐ धनी बन्ने इच्छा सबैको हुन्छ ।
तर कसैलाई जति मेहनत गरेपनि आर्थिक सं’कट आइरहन्छ। मेहनत गरे अनुसार पैसा कमाउन शा’स्त्र’का केही नियमको पनि पालना गर्न जरुरी छ। आज हामी तपाईलाई गर्न नहुने केही गल्तीका बारेमा जानकारी दिदैछौँ ।
२०७८ श्रावण २३, शनिबार प्रकाशित 1 Minute 988 Views